Khamiis, Maarso 18, 2020. 2:49 PM
Waad ku mahadsantahay dulqaadkaaga iyo wada shaqayntaada anagoo sii wadayna fulinta borotokoollada si loo sugo amaankaaga. Maalin kasta, waxaan si dhow ula soconaa oo u falanqeynaa horumarka iyo macluumaadka ka socda hay'adaha maxalliga ah, gobolka iyo federaalka. Waan sii wadi doonaa inaan ku siino wixii cusub markii aan ka warqabno. Tilmaamaha ku qoran qoraalkan ayaa isla markaaba dhaqan gala oo way is beddeli doonaan markay dhacdooyinku is beddelaan.
Fadlan dib u eeg qoraalka ku lifaaqan, boorarka ku saabsan barnaamijyada 'Excellus' Express Scripts iyo Telemedicine iyo xusuusintaada caafimaadka iyo badbaadada. Noo soo sheeg haddii aad wax su'aalo ama walaac ah qabtid. Sii wad inaad hubiso emaylladaada iyo ADP Home Bogga maalin kasta si aad u hesho macluumaadka ugu dambeeyay.
Sida had iyo jeer ah, waanu ku qanacsan nahay waxaad u qabanayso macaamiisheenna, LASMNY iyo taageerada aad siiso inta lagu jiro duruufahaas adag, weligood isbeddelaya.
Fariinta agaasimaha fulinta # 2
Talo Caafimaad oo Telemedicine Flier.pdf
Axad, Maarso 15, 2020. 2:32 PM
Bulshada Gargaarka Sharciga ee Mid-New York, Inc. (LASMNY) iyo Hay'adaha Adeegyada Sharciga (LSCNY), waxay tixgeliyaan caafimaadka iyo badbaadada shaqaalaheenna iyo qoysaskooda mudnaantayada. Waxaan si dhow ula socon jirnay wararka Coronavirus (oo si rasmi ah loogu yaqaanno COVID-19) maalin kasta. Waxaan qiimeynaa shaqaalaheena iyo macaamiisheena, rabitaankeenuna waa inaan si masuuliyadi ku dheehan tahay u dhaqaaqno markaan tixgelinayno talaabooyinka ay tahay inaan ka qaadno goobaha shaqadeena sida aan uga jawaabeyno masiibadan, oo ah xaalad deg deg ah oo qaran
Si kastaba ha noqotee, COVID-19 wuxuu sii wadaa inuu isbeddelo oo isbeddelo maalin kasta. Waan sii wadi doonaa inaan ku siino wixii cusub markii aan ka warqabno.
Fadlan dib u eeg waraaqaha ku lifaaqan iyo boodhadhka nala soo socodsii haddii aad wax su'aalo ama walaac ah qabtid. Tilmaamaha ku qoran qoraalkaani waa kuwo hordhac ah oo ku meel gaar ah waxayna isbedelayaan markay dhacdooyinka isbedelaan. Fadlan hubi emaylladaada iyo ADP Home Page maalin kasta si aad u hesho macluumaadka ugu dambeeyay.
Waan ka mahadcelineynaa dhammaan waxaad u qabateen macaamiisheenna iyo LASMNY!
Fariinta Agaasimaha Fulinta
Haddii aad ku xanuunsan tahay COVID19
Ka ilaali naftaada COVID19
Excellus BCBS Cusbooneysiinta 3/11/2020
SUNY UpState khadka kala-baxa kulul
Xaqiiqooyinka MVHS ee Degmada Oneida / Ku wad waditaanka imtixaanka